Ny 26 septambra, nahazo vaovao avy amin’ny olona tsara sitrapo ny polisy miasa ao amin’ity sampana miady amin’ny zava-mahadomelina ity izay nilaza fa misy olona mivarotra rongony eny Ankasina. Natao ny fanarahana sy ny vela-pandrika ka lehilahy telo no tra-tehaka teny Ankasina, 67 ha ny zoma teo tokony ho tamin’ny 1 ora sy fahefany tolakandro niaraka tamin’ny rongony 2 gony sy valizy 1; mitotaly 33 kg sy 500 grama moa ireo zava-mahadomelina ireo. Fantatra fa ny iray amin’ireo voasambotra ireo no tompon’ny rongony, ny iray kosa mpanelanelana ary ny 1 mpividy sy mpaninjara. Nahazo vahana ny trafikan’ny zava-mahadomelina tato ho ato. Tra-tehaka ireo mpivarotra sy ny sahan-drongony fa ny tompon’ny saha sy ny atidohan’ny tambazotran’ny asa ratsy mbola mijanona ho mistery hatrany. Anisan’ny tsy mampilamina iny 67ha iny ity rongony nitobaka eny an-toerana ity.